အရေးအကြီးဆုံးသောရေနံထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံများ? | စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး
Claudi casals | | စွမ်းအား
ရေနံသည်ကမ္ဘာ့အနက်ရောင်ရွှေဖြစ်သည်။ ရေနံသည်ကမ္ဘာကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ၎င်းနှင့်အတူဓာတ်ဆီ၊ ပလပ်စတစ်၊ အများအပြားရှိပါတယ်ပေမယ့် ရေနံထုတ်လုပ်သောနိုင်ငံများစပိန်နိုင်ငံသည်ရေနံထုတ်လုပ်သောနိုင်ငံတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ အနည်းဆုံးပမာဏအနည်းငယ်သာပါ ၀ င်ခြင်းမရှိသေးပါ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဘတ်ဂျက်၏အစိတ်အပိုင်းအများစုကို၎င်းင်း၏ ၀ ယ်ယူရန်အတွက်၎င်းင်း၏ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုကိုခံစားနေရသည်။
ဥပမာအားဖြင့်, ဒီနောက်ဆုံးနှစ်နှစ် ရေနံစျေးနှုန်းများစံချိန်တင် lows hit ပါပြီ စပိန်လိုတင်သွင်းတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်စုဆောင်းငွေအများကြီးရစေတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့တိုးလာမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ဆီနဲ့စတင်ပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့ဘဝကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမယ်၊
ဆီဈေးကိုတစ်စည်လျှင်သတ်မှတ်ထားသည်, လီတာသို့မဟုတ်ဂါလံအစား, ရေနံတည်ငြိမ်သောကောင်းသည်သောကြောင့်, ၎င်း၏စျေးနှုန်းဝယ်လိုအားအပေါ်အခြေခံပြီးသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အရာအားလုံးသည်ဗင်နီဇွဲလား၏ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် ၁၉၆၀ တွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးသောနိုင်ငံငါးနိုင်ငံ၊ ဘဂ္ဂဒက်တွင် တွေ့ဆုံ၍ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရေနံတင်ပို့သည့်နိုင်ငံများ၏အဖွဲ့အစည်း။ ယခုလက်ရှိတွင်နိုင်ငံပေါင်း (၁၃) နိုင်ငံရှိပြီးကမ္ဘာ့ထုတ်လုပ်မှု၏ (၄၅) ရာခိုင်နှုန်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ဤအဖွဲ့အစည်းသည်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ရန်ကမ္ဘာပေါ်ရှိရေနံပမာဏကိုထိန်းချုပ်သည်။ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရေနံအကျပ်အတည်းနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သကဲ့သို့ကမ္ဘာ့တည်ငြိမ်မှုကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူရုရှားကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းပြင်ပရှိနိုင်ငံများသည်သူတို့၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးနှုန်းများကိုတစ်ဖက်သတ်ထိန်းချုပ်ထားပြီး၊ သူတို့၏ဖောက်သည်နိုင်ငံများကိုစီးပွားရေးလက်နက်အဖြစ် အသုံးပြု၍ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်အတူတူပင်လုပ်ဆောင်ကြသည်။ နောက်မှတွေ့မယ် သောအရေးကြီးဆုံးရေနံထုတ်လုပ်သောနိုင်ငံများဖြစ်ကြသည်s.
အဓိကရေနံနိုင်ငံများဖြစ်သည် သူတို့သည်ယခင်အဖွဲ့အစည်း၏အသင်း ၀ င်များမဟုတ်ကြပါ။
အဓိကရေနံထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံများ၏စာရင်းသည်အမြဲတမ်းတူညီမှုမရှိပေ။ အမှန်စင်စစ်မကြာသေးမီကဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသည်ထိပ်တန်းဆယ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်၎င်းသည်အကြောင်းအရင်းသို့မဟုတ်လက္ခဏာရှိမရှိဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများ၏အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ ဗင်နီဇွဲလားအကျပ်အတည်း။
စီအိုင်အေမှသတင်းအချက်အလက်များအရ, ငါတို့အဓိကတင်ပြ ကမ္ဘာ၏ရေနံထုတ်လုပ်သောနိုင်ငံများ။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၀ ခုမြောက်အကြီးဆုံးသောရေနံထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၄ င်း၏ထုတ်လုပ်မှုသည်ရေနံစည်ပေါင်း ၂.၇ သန်းခန့်ရှိပြီးကမ္ဘာ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှု၏ ၃% ခန့်ရှိသည်။ ပါဒတ်ပင်လယ်ကွေ့တွင်ထင်ရှားသောစစ်ပွဲဖြစ်သည့် ၁၉၉၀ တွင်ဆက်ဒမ်ဟူစိန်နိုင်ငံကိုပြုလုပ်ခဲ့သော "စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု" ကြောင့်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
၄ င်း၏သိုက်များသည်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ သက်တမ်းရှိသည်ဟုခန့်မှန်းထားပြီးတိုင်းပြည်အတွက်ခိုင်မာသော ၀ င်ငွေအခြေခံဖြစ်သည်။
မက္ကစီကို ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၁ ခုမြောက်တင်ပို့သည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်နှင့်ရေနံစည်ပေါင်း ၂.၈၅ သန်းခန့်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးအနာဂတ်တွင်ကြီးမားသောသိုက်များရှိသောရေနံတွင်းများရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်တိုင်းပြည်အားပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ကြီးမားသောအလားအလာများရရှိခဲ့သည်။
ရေနံတင်ပို့မှုမှ ၀ င်ငွေသည်နိုင်ငံ၏စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေ၏ ၁၀% ရှိသည်။
အီရန်နိုင်ငံသည်စည်ပေါင်း ၃ ဒသမ ၄ သန်းထုတ်လုပ်သည်နှင့်၎င်း၏သိုက်များနှင့်အသုံးမပြုနိုင်သောရေတွင်းများကိုကျေးဇူးတင်ကြောင့်, ဒါခေါ် 'စူပါအင်အားကြီးနိုင်ငံများ' '၏တိုင်းပြည်အဖြစ်ယူဆသည်။
ထို ၃.၄ သန်းစည်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်နေ့စဉ်စီးဆင်းနေသောစုစုပေါင်းရေနံ၏ ၅.၁% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဤပို့ကုန်များမှရရှိသောငွေသည်အီရန်၏စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေ၏ ၆၀% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ထို့အပြင်ရေနံနှင့်သာမကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များဖြင့် ၀ င်ငွေအမြောက်အမြားကိုအာမခံပေးသော၎င်း၏သိုက်များအပေါ်မှီခိုစရာမလိုပါ။ အီရန်အကြောင်းပြောဖို့အများကြီးပေးလိမ့်မယ်
ယူအေအီးအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသည်အာရပ်နိုင်ငံတွင်အဘူဒါဘီ၊ အေဂျမန်၊ ဒူဘိုင်း၊ ဖူဂျီရာရာ၊ ရာ့စ်အယ်ခိုင်မာ၊ ဆာဂျာနှင့် Umm al-Qaywayn တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အတူတူ၎င်းတို့သည်စည်ပေါင်း ၃.၅ သန်းခန့်ထုတ်လုပ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်အဘူဒါဘီ၊ ဒူဘိုင်းနှင့်ဆာဂျီတို့ဖြစ်ကြသည်။ အဓိကအားဖြင့်ယူအေအီးအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှအရည်များထုတ်ယူခြင်း
၎င်းတို့တွင်စည်ပေါင်းဘီလီယံ ၁၀၀ ခန့်ရှိသည်။ သူတို့မှာပိုက်ဆံအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့အချင်းချင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကယ်တင်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။
အီရတ်နိုင်ငံသည်၎င်း၏ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပြproblemsနာများ၊ ပြည်တွင်းပconflictsိပက္ခများ၊ အယ်လ်ကေးဒါး၊ မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့သော Daesh တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာစစ်ရေးအရ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကြောင့်အပြစ်ပေးခံရခြင်းတို့ကြောင့်ပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးခံရသည်။
ဒီနေသော်လည်းအီရတ် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပဉ္စမအကြီးမားဆုံးရေနံသိုလှောင်ရာနိုင်ငံဖြစ်သည်အဓိကအားဖြင့်နဂိုအတိုင်းဖြစ်သောလယ်ယာမြေများရှိသော်လည်း၎င်းသည်တိုင်းပြည်၏စွမ်းအင် ၉၄% နှင့်တိုင်းပြည်၏စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေ၏ ၆၆% ကိုထောက်ပံ့ပေးသောရေနံစည်ပေါင်း ၄ သန်းခန့်ထုတ်လုပ်သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံသည်ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ ၀.၅% သာရှိသော်လည်းကမ္ဘာပေါ်တွင်စီးဆင်းနေသောရေနံ၏ ၅% ကျော်ကိုထုတ်လုပ်သည်။
၎င်းသည်စည်ပေါင်း ၄ ဒသမ ၅ သန်းထုတ်လုပ်ပြီး၎င်း၏သိုက်များသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တတိယအကြီးဆုံးရေနံသိုလှောင်ရာစည်သန်း ၁၈၀,၀၀၀ သို့ရောက်ရှိသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံ၏ 'ပြ'နာ' မှာသယံဇာတအများစုသည်ကတ္တရာတွင်းများဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ထုတ်ယူခြင်းကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ နည်းပညာကထုတ်ယူခြင်းနည်းပညာကိုစျေးသက်သက်သာသာနဲ့ပြီးတဲ့အခါကနေဒါရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုဟာကြီးထွားလာလိမ့်မယ်။
တရုတ်ရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုသည်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၅၀ အတွင်းတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခဲ့သည်။ အစိုးရကစီးပွားရေးဖွင့်လှစ်မှုကြောင့်လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်အတွင်းမမျှော်လင့်ဘဲကြီးထွားလာခဲ့သည်။
ရေနံစိမ်းစည်ပေါင်း ၄ ဒသမ ၆ သန်းထုတ်လုပ်သည်သို့သော်၎င်း၏စားသုံးမှုသည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုဖြစ်သည့်တိုင်ရုရှားနှင့်အခြားအာရှနှင့်အာရပ်နိုင်ငံများမှရေနံစိမ်းတင်သွင်းသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။
သိုလှောင်ထားသည့်ပမာဏသည်စည်ပေါင်းဘီလီယံ ၂၀ ခန့်ကျိုးနွံမှုရှိသော်လည်းအနိမ့်အမြင့်များဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရေထုများ (ဟိုက်ဒရောလစ်ကျိုးခြင်း) ကြောင့်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သိုက်များသိသိသာသာကြီးထွားလာမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ရုရှားကအရာအားလုံးမှာgရာမဖြစ်တယ်။ ရေနံနဲ့အတူငါတို့ Achilles ဖနောင့်ကိုရှာမတွေ့ဘူး။
သူတို့၏ ရေနံစည်ပေါင်း ၁၁ သန်းသည်စုစုပေါင်း၏ ၁၃-၁၄% ကိုကိုယ်စားပြုသည် ကမ္ဘာပေါ်မှာရွေ့လျားနေတဲ့ရေနံစိမ်း။
၎င်း၏သိုက်များသည်နိုင်ငံအတွင်းတတိယအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးဆိုက်ဘေးရီးယားနှင့်ရုရှားမြောက်ပိုင်း၊ အာတိတ်တွင်ရေခဲအောက်တွင်ဖုံးကွယ်ထားသောရေနံစိမ်းအားလုံးနှင့်ထူထပ်။ အစိုင်အခဲရေခဲများမပါဝင်ပါ။
ရုရှားသည်ပိုင်နက်နယ်မြေတွင်ကမ္ဘာမြေ၏စုစုပေါင်းterritoryရိယာ၏ခြောက်ပုံတစ်ပုံကိုကိုယ်စားပြုသည်ကိုသတိရပါ၊ ၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏သိုက်များအားလုံးကိုအပြည့်အဝအသုံးမပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားမြင်စေသည်။
မကြာသေးမီအချိန်အထိရေနံစည်ပေါင်း ၁၂ သန်းနီးပါးရှိသောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ရေနံစိမ်း၊ ရှိပြီးသားရေနံစိမ်း၏ 5% ကိုကိုယ်စားပြုသည် ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်နှင့်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, ဆဲအသုံးမပြုသေးသော။
fracking နှင့်၎င်း၏ရေနံမြေများပိုမိုအမြတ်ထုတ်မှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည် မြောက်အမေရိကရှိတတိယနိုင်ငံသည်ကမ္ဘာ့အဆင့်တွင်ရှိသည် 14 ဘီလီယံနီးပါးရေနံစိမ်းနှင့်အတူ။ နည်းပညာတွင်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြောင့်သူတို့သည်ကတ္တရာစေးနှင့်ယှေလကျောက်ကဲ့သို့ခေတ်သစ်ရေနံစိမ်းထုတ်ယူသည့်နည်းလမ်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရေနံစိမ်းအများဆုံးထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံဖြစ်သော်လည်းတရုတ်နိုင်ငံ၏ပြproblemနာရှိသည်။ မက္ကဆီကိုနှင့်ကနေဒါနိုင်ငံတို့သို့ရေနံစိမ်းအမြောက်အမြားကိုတင်သွင်းသည်။ သူတို့၏ဝယ်လိုအားသည်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုကျော်လွန်နေသည်။
ရေနံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း - ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်အများဆုံးတက်ကြွသောစျေးကွက်
ရေနံထုတ်လုပ်သောနိုင်ငံဖြစ်ခြင်းသည်သင့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရုံသာမကကမ္ဘာကြီးကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောရှုထောင့်ဖြင့်ရှုမြင်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာကြီးမားသောထုတ်လုပ်မှုများအပြင်၎င်းတို့တွင်ထိုအနေအထားနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုအာမခံသောအရံတစ်ခုရှိသည်။ အနာဂတ်။
ဗင်နီဇွဲလား - 297,6
ဆော်ဒီအာရေဗျ - 267,9
ကနေဒါ - 173,1
အီရန် - ၁၅၄.၆
အီရတ် - ၁၄၁.၄
ကူဝိတ် - ၁၀၄
ယူအေအီးအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု - ၉၇.၈
ရုရှား - ၈၀
လစ်ဗျား - 48
နိုင်ဂျီးရီးယား - ၃၇.၂
ကာဇက်စတန် - ၃၀
ကာတာ - 25,380
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု - 20,680
တရုတ် - 17,300
ဘရာဇီး - ၁၃,၁၅၀
အယ်လ်ဂျီးရီးယား - 12,200
အင်ဂိုလာ - 10,470
မက္ကဆီကို - 10,260
အီကွေဒေါ - 8,240
အဇာဘိုင်ဂျန် - ၇
ဒါဟာဘာလဲဆိုတာသိရန်လိုအပ်သည် တင်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်သောနိုင်ငံများ အများကြီး, နှင့်လက်တွေ့, ရေနံအပေါ်အမျိုးသားစီးပွားရေး။ အီရန်၊ မက္ကဆီကိုနှင့်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံများကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များကိုမြင်တွေ့ရသည်။ ဤလများကျဆင်းခြင်းသည်ယခုလများကြုံခဲ့ရသကဲ့သို့သူတို့၏ဘတ်ဂျက်များကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်။
အာဖရိကတွင်အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ အင်ဂိုလာ၊ လစ်ဗျားနှင့်နိုင်ဂျီးရီးယား။
အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ အီရတ်နှင့်ကူဝိတ်တို့ရှိသည်။
နောက်ဆုံးတွင် OPEC အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သောအကြီးစားထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကနေဒါ၊ ဆူဒန်၊ မက္ကဆီကို၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ နော်ဝေ၊ ရုရှားနှင့်အိုမန်တို့ရှိသည်။
စာရင်းလိမ့်မည် ရေနံထုတ်လုပ်သောနိုင်ငံများ အချိန်ပို? ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ကြသည့်အများစုမှာနှစ်ပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်မှုဇယားထိပ်ဆုံးတွင်ရောက်နေသောကြောင့်မကြာမီပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အကြွေစေ့၏ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်နေ့စဉ်စည်အများဆုံးသုံးစွဲသောနိုင်ငံများရှိသည်။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အမေရိကန်ကဲ့သို့အကြီးမားဆုံးရေနံထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သော်လည်းရေနံတင်ပို့မှုထက်ပိုမိုတင်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည် ၀ ယ်လိုအားသည်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ထုတ်လုပ်မှုထက်များစွာသာလွန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အနည်းငယ်ပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုရန်နှင့်ဤဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွေးအမြင်ရှိစေရန်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီ၏နေ့စဉ်စားသုံးမှုနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ပျမ်းမျှစားသုံးမှုကိုအောက်ပါစာရင်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။
2019 ခုနှစ်တွင်ရရှိသောဒေတာ, 2018 ခုနှစ်တွင်ဤခဲ့ကြသည် တစ်နေ့လျှင်စားသုံး (ထောင်ပေါင်းများစွာအတွက်) စည် နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီအတွက်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု - 20.456
တရုတ် - ၅၆.၁
အိန္ဒိယ - ၅၀၀
ဂျပန် - ၂၉
ရုရှား - 3.228
ဂျာမနီ - ၁၆
အင်ဒိုနီးရှား - ၅၀၀
ယူကေ - ၁၈
ပြင်သစ် - ၁၈
ထိုင်း - ၁,၄၇၈
စင်္ကာပူ - 1.449
စပိန် - 1.335
အီတလီ - ၅
သြစတြေးလျ - ၃.၆
တစ်ဖက်မှာ လူ ဦး ရေပမာဏ နှင့်အခြားအပေါ် တစ်ခုချင်းစီကိုနိုင်ငံ၏ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး ချင်းဝင်ငွေဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဤအချက်ကအမေရိကန်သည်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခြင်းမရှိသည့်အတွက်ရေနံကို (တစ် ဦး လျှင်တစ်နေ့လျှင် ၂၂ စည်ခန့်) သုံးစွဲခဲ့သည်ဟုရှင်းပြသည်။ အမှန်မှာလူ ဦး ရေသည်လူတစ် ဦး စားသုံးသည့်ပမာဏထက်နှစ်ဆကျော်ပျမ်းမျှစားသုံးကြသည် စပိန် (နေထိုင်သူတစ် ဦး လျှင်တစ်နေ့လျှင် ၁၀ စည်) ။ ထို့ကြောင့်လူ ဦး ရေပိုများသော်လည်းတရုတ်နိုင်ငံကဲ့သို့တစ် ဦး ချင်းဝင်ငွေနည်းပါးသည့်နိုင်ငံများသည်အမေရိကန်ထက်ရေနံသုံးစွဲမှုလျော့နည်းသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယတို့သည်အလွန်ဆင်တူသည်။ အိန္ဒိယသည်လူ ဦး ရေနည်းသည်။ သို့သော်တရုတ်၏ကြွယ်ဝမှုအဆင့်မှာမြင့်မားသောကြောင့်ရေနံသုံးစွဲမှုမှာလည်းပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တစ်စည်လျှင်ရေနံစည်တစ်ခုစီ၏ပျမ်းမျှနှုန်းမှာ ၅၅ ဒေါ်လာခန့်ရှိပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်သို့သယ်ဆောင်နိုင်သည်။ စပိန်နိုင်ငံသည်တစ်နေ့လျှင်စည်ပေါင်း ၁၃၃၅၅၀၀၀ သုံးစွဲသည်။ တစ်နေ့လျှင်ဒေါ်လာ ၇၃၅၀၀၀၀၀ ကုန်ကျသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » ချွေတာ » စွမ်းအား » ရေနံထုတ်လုပ်သောနိုင်ငံများ
ဟိုဆေးအိန်ဂျယ် Quintanilla: D ဟုသူကပြောသည်
JoséÁngel Quintanilla D သို့ပြန်ပြောပါ
ဇူလိုင်လ 6, 2016, 11:16 a.m. အပေါ် Susana မာရီယာ Urbano Mateos အားဖြင့်တင်ခဲ့သည်
Danny Daniel ဟုသူကပြောသည်
DANNY DANIEL အားပြန်ပြောပါ